Akụkọ - Ị chọrọ ịgbanye microchips RFID Tag n'ime anụ ụlọ gị?
Ị chọrọ ịgbanye RFID microchips RFID Tag n'ime anụ ụlọ gị?
Na nso nso a, Japan ewepụtala ụkpụrụ: malite na June 2022, ụlọ ahịa anụ ụlọ ga-etinyerịrị ibe microelectronic maka anụ ụlọ rere. Na mbụ, Japan chọrọ nwamba na nkịta ebubata ka ha jiri microchip mee ihe. N'ihe dị ka n'October gara aga, Shenzhen, China, mejuputa iwu "Shenzhen Regulations on Implantation of Electronic Tag for Dogs (Trial)", na nkịta niile na-enweghị mgbawa ga-ewere dị ka nkịta na-enweghị ikike. Dịka njedebe nke afọ gara aga, Shenzhen enwetala mkpuchi zuru oke nke njikwa mgbawa nkịta rfid.
Akụkọ ngwa na ọnọdụ ugbu a nke ibe ihe anụ ụlọ. N'ezie, iji microchips eme ihe na anụmanụ abụghị ihe ọhụrụ. Ịzụ anụ na-eji ya edekọ ozi anụmanụ. Ndị ọkà mmụta banyere anụmanụ na-akụnye microchips n'ime anụ ọhịa dịka azụ na nnụnụ maka ebumnuche sayensị. Nnyocha, na ịkụnye ya n'ime anụ ụlọ nwere ike igbochi anụ ụlọ ịla n'iyi. Ka ọ dị ugbu a, mba dị iche iche n'ụwa nwere ụkpụrụ dị iche iche maka iji RFID pet microchips tag: France kwuru na 1999 na nkịta gafeworo ọnwa anọ ga-eji microchips gbanye, na 2019, iji microchips maka nwamba bụkwa iwu; New Zealand chọrọ ka a kụọ nkịta anụ ụlọ n'afọ 2006. N'April 2016, United Kingdom chọrọ ka etinyere nkịta niile na microchips; Chile mebere iwu ikike ikike anụ ụlọ na 2019, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nde nwamba na nkịta ka etinyere na microchips.
Teknụzụ RFID hà nha ọka osikapa
Chip rfid Pet Chip abụghị ụdị mpempe akwụkwọ dị nkọ nke ọtụtụ ndị mmadụ na-eche (dị ka egosiri na eserese 1), kama ọ bụ ọdịdị cylindrical yiri osikapa ọka ogologo, nke nwere ike ịdị ntakịrị ka 2 mm na dayameta na 10. mm n'ogologo (dị ka egosiri na foto 2). . Nke a obere "ọka osikapa" bụ mkpado na-eji RFID (Radio Frequency Identification Technology), na ozi dị n'ime nwere ike ịgụ site na otu "onye na-agụ" (Nyocha 3).
Kpọmkwem, mgbe etinyere mgbawa ahụ, koodu ID dị na ya na ozi njirimara nke onye na-azụ anụ ga-ejikọta ma chekwaa na nchekwa data nke ụlọ ọgwụ anụ ụlọ ma ọ bụ nzukọ nnapụta. Mgbe a na-eji onye na-agụ achọpụta anụ ụlọ na-ebu mgbawa, gụọ ya Ngwa ahụ ga-enweta koodu ID wee tinye koodu n'ime nchekwa data iji mara onye nwe ya kwekọrọ.
A ka nwere ọtụtụ ohere maka mmepe n'ahịa mgbawa anụ ụlọ
Dị ka akwụkwọ akụkọ “2020 Pet Industry White Paper” si kwuo, ọnụ ọgụgụ nkịta anụ ụlọ na nwamba anụ ụlọ na mpaghara obodo China karịrị nde 100 n'afọ gara aga, ruru nde 10.84. Site na mmụba na-aga n'ihu nke ego onye ọ bụla na-enweta na mmụba nke mkpa mmetụta uche nke ndị na-eto eto, a na-eme atụmatụ na n'afọ 2024, China ga-enwe nwamba na nkịta dị nde 248.
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahịa Frost & Sullivan kọrọ na na 2019, e nwere nde anụmanụ RFID 50, nke nde 15 bụ. RFID iko tube mkpado, 3 nde nduru mgbanaka ụkwụ, na ndị ọzọ bụ ntị mkpado. Na 2019, ọnụ ọgụgụ nke ahịa mkpado anụmanụ RFID erutela yuan nde 207.1, na-aza 10.9% nke ahịa RFID dị ala.
Ịkụnye microchips n'ime anụ ụlọ adịghị egbu mgbu ma ọ bụ ọnụ
Usoro ntinye microchip anụ ụlọ bụ ịgba ntụtụ subcutaneous, nke na-adịkarị n'azụ elu nke olu, ebe a na-emepụtaghị irighiri akwara mgbu, ọ dịghị mkpa nrịanrịa, na nwamba na nkịta agaghị adị oke mgbu. N'ezie, ọtụtụ ndị nwe anụ ụlọ ga-ahọrọ ịgba ọgwụ mgbochi anụ ụlọ ha. Tinye mgbawa n'ime anụ ụlọ n'otu oge ahụ, ka anụ ụlọ ahụ ghara inwe mmetụta ọ bụla na agịga ahụ.
N'ime usoro mgbawa anụ ụlọ, ọ bụ ezie na agịga sirinji buru ibu, usoro siliconization metụtara ngwaahịa ahụike na ahụike na ngwaahịa ụlọ nyocha, nke nwere ike belata nguzogide ma mee ka injections dị mfe. N'ezie, mmetụta ndị dị n'itinye microchips n'ime anụ ụlọ nwere ike ịbụ ọbara ọgbụgba nwa oge na ntutu isi.
Ka ọ dị ugbu a, ụgwọ ntinye microchip anụ ụlọ bụ isi n'ime yuan 200. Ndụ ọrụ dị ka afọ 20, ya bụ, n'okpuru ọnọdụ nkịtị, anụ ụlọ naanị kwesịrị ịkụnye mgbawa otu ugboro na ndụ ya.
Tụkwasị na nke ahụ, microchip anụ ụlọ anaghị enwe ọrụ nhazi, ma ọ na-arụ ọrụ naanị na ịdekọ ozi, nke nwere ike ịbawanye ohere nke ịchọta pusi ma ọ bụ nkịta furu efu. Ọ bụrụ na achọrọ ọrụ ndokwa, enwere ike ịtụle olu olu GPS. Ma ọ bụrụ na ọ na-eje ije nwamba ma ọ bụ nkịta, eriri ahụ bụ ndụ ndụ.
Oge nzipu: Jan-06-2022